विचार | Indrenionline.com | Page 2
मिडिया मालिकको निर्दयी निर्णयले सडकमा पछारिएँ – उदय जिएम
मसँगैका साथीहरु आजभोलि पेन्सन थाप्छन् । म चाहिँ आफ्नो बैंश र जीवनको उर्बर समय पत्रकारितामा खर्चिएँ अनि मिडिया मालिक र सम्पादकीय नेतृत्वको विवेकहीन र निर्दयी निर्णयले सडकमा पछारिएँ । यो उदाहरण मेरो हो तर आम नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको जीवनको कटु यथार्थता । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ? के उसको कुनै भविष्य छैन ? अहोरात्र खटिएर ...
कांग्रेसले चलाएको एक असल अभियान
गोविन्द खड्का मेयरका प्रत्यासी भुप बहादुर डाँगी , उपमेयर पुष्पा श्रेष्ठ, घोराही १५ का वडा निर्वाचीत अध्यक्ष रमेश पाण्डेय, पार्टी सचिव शंकर प्रसाद डाँगी लगाएत विद्युतका पोलमा चढेको फोटा बिहिवार फेसवुकमा सार्वजनिक भयो । उनिहरुका हात हातमा पोल वाट निकालेका रुख चिन्ह अंकीत झण्डा थिए । तिलक रावतले सार्वजनिक गर्नुभएका तस्विरमा भ¥याङ चढेर विद्युतका पोल बाट नेपाली कांग्रेशका झण्डा निकालीदै ...
लक्ष्मण रसाइली जाजरकोट ४ साउन । मान्छे मान्छे एउटै हुन्छ भन्ने हरेक मानबको मुख बाट सुनिन्छ।तर हाम्रो समाजमा जातिय छुवाछूत तथा भेदभावको जालो भने अझै उस्तै छ,जहिले जातियतामा वर्गीकरण गरिएको थियो।काटदा रगत एउटै आउँछ जुन उच्च जात अनि सानो जात भन्ने हरुको।नाक त्यही हो,कान त्यही हो,मुख त्यही शारीरिक बनावट पनि त्यही हो तर ठुलो र सानो जात छ यहाँ ,हुन ...
चुंदी रम्घा पुगे पछि…..
–के.बि.मसाल धेरै साहित्यकारहरुले भानु भक्तको बारेमा लेख्नु भएको छ होला ? भानु भक्तले लेखेका कविता कण्ठ पार्नु भएको होला ! तर तपाईहरु मध्य धेरैजना भानुको जन्मस्थल तनहूको चुंदी रम्घा पुग्नु भएको छैन होला ? यस पटक काठमाण्डौ गएको समयमा एक जना साहित्यकार मित्रलाई यो कुरा भन्न के लागेको थिए । उहाले तुरुन्त चुंदी रम्घा जान इच्छा ब्यक्त गर्नु भयो । ...
अन्तर्घात होईन सबक भनौ
गोविन्द खड्का निकै चल्तीको शब्द अन्तर्घात भएको छ । स्थानिय तहको मत परिणाम सार्वजनिक संगै यो शब्दको भाउ बढेको हो । त्यसमा पनि संसदको पहिलो पार्टी कांग्रेसीजनमा यसले निकै महत्व पाएको छ । अव अन्तर्घातको कुरा छ । पहिलो संविधान सभा माओवादिले, दोश्रो नेपाली कांग्रेशले र अहिलेको चुनाव एमालेले जीत हासिल ग¥यो । शान्तिकाल पछिको यति समयलाई मात्रै हेर्ने हो ...
चुनावी उत्साह र नेताहरुको अलमल
गोविन्द खडका मतदान गरीसकेपछि पनि हारजीतको अन्यौलता कायम रह्यो । अझ गजब कुरा त प्रतिस्पर्धि समेत ठम्याउन सकिएन । गोप्य मत दिने यो तरीकालार्ई संसदिय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष मान्नुपर्छ । त्यसो भन्दैमा छिटफुट घटना नभएका होईनन् । देशैभरी कहि न कहि हिंसात्मक घटना भएका छन् । सकारात्मक कामहरुको तुलनामा त्यो नगण्य हो । कसैले सकारात्मकलाई मात्रै देख्ने कसैले कमजोरी मात्रै ...
के.बि.मसाल मानिस स्वभावले नै विविधता मन पराँउछ चाहे जेसुकै कुरामा होस् । उसलाई नयाँ नयाँ साथी, ठाँउ, घर अनि खाना मन पर्दछ । भुपरिवेष्ठित देशका मानिस समुन्द्र देख्दा रमाँउदछन अनि सामुन्द्रिक भूगोलका मनिसहरु हिमाल र पहाड देखेर रमाँउदछन् । यो मानवको स्वभाव हो, विविधतामा रमाउने । त्यसैले त हरेक मानिस घुमफिर गर्न रमाउछ । नेपालमा वाह्य पर्यटकहरु हिमाल र जैविक ...
निर्वाचन बिगत र बर्तमान
के.बि.मसाल निर्वाचन भनेको जनताद्वारा जनताका प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया हो । नेपालमा निर्वाचनको प्रयोग र अभ्यास ७० बर्ष अगाडी देखि हुँदै आएको छ । राणा शासनको अन्तिम समयमा म्युनिसिपालिटीको नाममा २००४ जेठ ३ गते राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो निर्वाचन गराएका थिए । निर्वाचनबाट गेहेन्द्रशमशेर थापा म्युनिसिपालिटीको सभापति भएका थिए । त्यतिवेला करिब ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो भने निर्वाचनमा महिलालाई भने ...
आषाढ पन्ध्र, कृषि नीति र जैविक खेती
के.वि.मसाल छुपुमा, छुपु रोपन दिदै, हातमा विऊ छन्जेल हास र खेल नमान पिर, बाबाको जिउ छन्जेल । असारे मासा दबदबे हिलो, छि मलाई घिन लाग्यो, पातली नानीलाई फरिया किन्दा, छ बिस ऋण लाग्यो । हाम्रो समाज सस्कृतीमा हुर्केको समाज हो । घरद्धार निर्माण देखि लिएर खेतीपाती गर्दा पनि हामी नेपालीहरुको आ–आफ्नै सस्कृती रहेका छन । अषाढ १५ मा दही ...
जिशिअ मैनाली र दाङका विद्यालय
गोविन्द खड्का ‘म अफिसमा बसेको थिए“ । एउटी छात्रा केही तलु कपडा छ कि दाई ? भन्दै आत्तीएर आईन् । कार्यालय सहयोगीले उद्युम पत्ताल खोजे । दराजको माथि पट्टि एउटा व्यानर भेटाए । धुलै धुलो रहेछ । बेसरी फड्कारेर धुलो टक्टक्याए । बहिनीलाई दिए । पद्यमोदय पब्लीक नमुना माध्यामिक विद्यालय घोराही कि ति छात्राले च्यातिन पट्यादै वाथरुम तिर गईन् ।’ ...